ဆံသားတွေကိုအိမ်မှာ အလွယ်တကူ Treatment လုပ်နိုင်မယ့် Olaplex Hair Perfector No.3! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဆံသားတွေကိုအိမ်မှာ အလွယ်တကူ Treatment လုပ်နိုင်မယ့် Olaplex Hair Perfector No.3!
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Olaplex Hair Perfector No.3 ဟာဘာလဲလို့ အကုန်လုံးကစိတ်ဝင်စားကြမှာပါနော်။ ဒီ Product ကို Conditioner လားဆိုပြီးထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်​တော့ Conditiner မဟုတ်ပါဘူး။ ပျက်စီးနေတဲ့ဆံသားတွေကို Treatment ပြန်လုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Product ဖြစ်ပါတယ်။ Olaplex products တွေဟာဆိုရင် ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းမှာ ကမ္ဘာကျော် မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ Product ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အသေးစိတ်လေ့လာဖော်စပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အရေအသွေးပိုင်းကတော့ ရာနှုန်းပြည့် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဆံသားများနှစ်ခွဖြစ်နေခြင်း၊ ဆိုးဆေးဒဏ်များကြောင့် ဖွာထွက်ပျက်စီးနေသော ဆံကေသာများကို အကောင်းမွန်ဆုံးနဲ့ အလျင်မြန်ဆုံးပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဆံသားမျိုးဖြစ်နေပါလေစေ လှပအသက်ဝင်တဲ့ ဆံသားကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
Weekends call for #Olaplex N°3 treatments. How often do you use N°3? ✨ [photo: @hairbyrachelm]
A post shared by OLAPLEX (@olaplex) on Oct 21, 2017 at 3:46pm PDT
Sorry, can’t hear you through the volume of my hair. 🌀 @ck_frias curls are everything! She uses Olaplex No.3 regularly to keep them healthy and strong. 💪🏽With Summer near, treating your hair against environmental damage is more important than ever. Using No.3 weekly will ensure you are rebuilding and strengthening the bonds in the hair after all the fun in the sun. ☀ #TextureTuesday #Olaplex
A post shared by OLAPLEX (@olaplex) on May 23, 2017 at 6:13am PDT
W 🌀W! @hif3licia is an avid #Olaplex user and we can see why! Her curls are popping even after highlights— check our 👻 (we’re ‘olaplex’ on snapchat) to find out how Olaplex helps her keep the twirl in her curl! 💕
A post shared by OLAPLEX (@olaplex) on Jul 1, 2017 at 12:35pm PDT
Shampoo, Conditioner အသုံးပြုပြီးနောက် စိုစွတ်နေသော ဆံသားကို တဘက်နဲ့ အနည်းငယ်ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ Olaplex Hair Perfector No.3 ကို ပျက်စီးနေသောဆံပင်ပေါ်သို့ သုတ်လိမ်းပြီး ၁၀မိနစ်ခန့် ထားပေးပါ။ အကြာပိုကြာအောင် ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ထားနိုင်ပါတယ်။ တပတ်ကို နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်အထိ လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာ ဆံသားဟာ ပိုမိုသန်စွမ်းပြီး အရောင်ကအစ တောက်ပြောင်လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ အရေအသွေးပိုင်းသာမက ကမ္ဘာကျော် Cele တွေကပါ နှစ်ခြိုက်စွာ အသုံးပြုနေကြတာကြောင့် တွေဝေနေစရာတောင်မလိုတော့ဘူးနော်။ အိမ်မှာတင် အလွယ်တကူ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်တာကြောင့် ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာပြီး အချိန်တွေလည်း မကုန်တော့ဘူးပေါ့။
Where do we even begin? One for every mood. ☑ All color and styles by the talented @alennmj with #Olaplex.
A post shared by OLAPLEX (@olaplex) on Dec 10, 2017 at 6:23pm PST
Image Source : olaplex.com